२२ बर्षिया युवतीको डाक्टरलाई प्रश्न ‘किन मलाई कहिल्यै यौनइच्छा हुदैन’ ? - Enepal Serofero
२२ बर्षिया युवतीको डाक्टरलाई प्रश्न ‘किन मलाई कहिल्यै यौनइच्छा हुदैन’ ?
२२ वर्षीया विवाहित महिला हुँ । मलाई कहिल्यै यौनसम्पर्क गर्न मन लाग्दैन । त्यसले गर्दा श्रीमानसँग झगडासमेत भैरहन्छ । यो कुनै रोग त होइन ? यो समस्या समाधान गर्न के गर्नुपर्ला ?
उत्तर- राजेन्द्र भद्रा
Prevअन्ततः दीपक र दीपा विवाह बन्धनमा बाधिए !
Nextसम्बन्ध बिच्छेद नगर्दा २० वर्षीय नवविवाहित किशोरीलाई जिउँदै जलाइयो